Shina · Mey, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Shina · Mey, 2016
Tantara mikasika ny Shina tamin'ny Mey, 2016
Misavoana Ambony ny Fisandratan'i Papi Jiang Olomalazan'ny Aterineto Shinoa (Vao Avy Tratran'ny Sivana)
Fanampenam-bava 31 Mey 2016
Andro vitsy monja taorian'ny nanesoran'ny mpanao sivana aterineto ny clip nataony noho ny fiteny adala, dia nahavarotra zoro fanaovana dokambarotra 3,5 tapitrisa dolara amerikana izy teo amin'ny famoahany lahatsary isan-kerinandro.
Miatrika Ny Fandriky Ny Trosa Anaty Tranonkalam-pifandraisana ireo Shinoa Mpianatra
Lalàna 23 Mey 2016
Nilaza ny People’s Daily, izay tantanan'ny governemanta, fa tokony "hitarika ny fisainan'ny [zanany], hikolokolo ny fahalalàny ara-bola ary hampitombo ny fahatsapàny ny loza mety hitranga" ny ray aman-dreny
Japana 21 Mey 2016
Taorian'ny Fidarohana Nahafaty Tanora Iray, Mitaky Lalàna Henjana Kokoa Ny Shinoa Mba Hampitsaharana Ny Fampijaliana
Lalàna 20 Mey 2016
"Tsy vitantsika ny hanaisotra tsirairay ireo ahidratsy. Fampijaliana any an-tsekoly, ny herisetran-javoto, ireny karazana fitondrantena tsy mivoatra rehetra ireny dia maka ny fàkany daholo avy any anatin'ny fiarahamonina sy ny ankohonana."
Hong Kong (Shina) 19 Mey 2016
Noroahan'ny Vondrona Mpanenjika Hosoka Ny Alibaba, Masiaka ireo Shinoa Mpanjifa
Mediam-bahoaka 17 Mey 2016
"Mipetraha ao an-trano. Raha avo lenta sady mora ilay hosoka azonao, hanohana anao ny vahoaka Shinoa ary tsy misy na iza na iza hanilika anao."
Mandrava Fandefasana Lahatsary An-Tserasera Mivantana Ireo Shinoa Mpanao Sivana, Anisan'izany Ny Fihinanana Akondro Amin'ny Fomba Erotika
Fanampenam-bava 16 Mey 2016
Koa satria tsy ho azo atao ny mijery mialoha ny votoaty alefa mivantana, dia nanangana sampan'ny polisy ao amin'ireo biraon'ny sehatra lehibe fandefasana fandaharana mivantana an-tserasera ny biraon'ny filaminam-bahoakan'i Shina hanara-maso ireo votoaty mandeha mivantana.
Mitandrina Fatratra Ireo Avy Ao Taiwan Taorian'ny Naninjiran'i Shina Ny Tànany Hatrany Kenya
Kenyà 07 Mey 2016
"Mampivarahontsana ity tranga ity...... Mety horoahana hiverina any Shina izahay rehefa miteny ny governemanta Shinoa fa hoe nohitsakitsahanay ny lalàna Shinoa (na dia tsy nisy lalàna nohitsakitsahanay akory aza tany amin'ilay firenena nalehanay)."
Mitsikera Mafy An'i Shina Noho ny Fanjavonan'ireo Mpivaro-boky ao Hong Kong Ny Vondrona Eoropeana
Eoropa Andrefana 06 Mey 2016
"Ahitana fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny fahalalahana fototra ny raharaha fanjavonan'ireo mpivaro-boky tao Hong Kong ary miteraka fanahiana goavana amin'ny tany tan-dalàna eo ambanin'ny rafitra "firenena iray, rafitra roa..."
Fahalalahàna miteny 03 Mey 2016